बेलाइत हुनुको श्रेय हो आधुनिक शरीर सौष्ठव को जन्मस्थान। शरीर सौष्ठव धेरै शारीरिक लाभ प्रदान गर्दछ र तपाइँको शरीर सुधार्न सक्छ।
जब तपाईं शरीर सौष्ठवमा बढी सक्रिय हुन्छन्, तपाईंले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंलाई चाहिएको परिणामहरू प्राप्त गर्न तपाईंलाई केही मद्दत चाहिन्छ।
यो जब पूरक र हो छनौट एन्ड्रोजन रिसेप्टर मोडुलरहरू (SARMs) भित्र आउँछ। धेरै पेशागत शरीर सौष्ठव, फिटनेस उत्साही, र अधिक प्रयोग पूरकहरू र SARMs आफ्नो शक्ति कायम राख्न र नयाँ लक्ष्यहरू विजय गर्न।
तर कुनै पनि दुई उत्पादनहरू समान छैनन्। तपाईं SARMS र पूरकहरूको प्रकारहरू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ जसले तपाईंलाई उत्तम परिणामहरू दिन्छ जबकि सुरक्षा पनि राख्दछ।
यहाँ सबै भन्दा राम्रो SARMS र पूरक लिनु हो।
सबै प्रोमोर्मनहरू जस्तै SARM एन्ड्रोजन रिसेप्टर्स (एआर) लाई बाँधेर मांसपेशिको निर्माण गर्नुहोस्। SARMs साइड इफेक्ट न्यूनतम गर्दा मांसपेशिहरु निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ ए एन एगोनिस्टहरू पनि छन् एनाबोलिक टिश्यु जस्तो कि कंकाल मांसपेशीहरूमा तर केवल आंशिक विरोधीहरू हुन्छन् सेक्स अ organs्ग र प्रोस्टेटमा ताकि एस्ट्रोजेन रूपान्तरण हुँदैन। यसको पनि अर्थ छ SARMs ले मांसपेशिको खेर फाल्ने अवस्थालाई फाइदा पुर्‍याउँछ र यो पनि एक प्रभावकारी पुरुष गर्भनिरोधक उपचार विधि हो।
जबकि SARMs र उनीहरूका सामग्री / पदार्थ कानूनी रूपमा प्रतिबन्धित छैनन्, तिनीहरू वर्ल्ड एन्टी डोपिंग एजेन्सी (वाडा) जस्ता प्रमुख खेल संघ द्वारा प्रतिबन्धित छन्।
दिमागमा राख्नुहोस्, तपाइँले SARMs दीर्घ-अवधि लिनुहुन्न। यो सिफारिश गरिएको हो कि तपाईं निश्चित समयको लागि न्यूनतम खुराक मात्र लिनुहुन्छ (चार र १२ हप्ताको बीचमा जहाँ पनि हुन सक्छ)।
तपाईंले SARM चक्र लिनुभएपछि, तपाईं पोष्ट चक्र चिकित्सा (PCT) को साथ अनुसरण गर्नुहुन्छ। हामी पछि यसबारे छलफल गर्नेछौं।
तपाईं या त SARMs स्ट्याक लिन सक्नुहुनेछ वा SARMs व्यक्तिगत रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ लिनु पर्ने उत्तम व्यक्तिहरू छन्।
Ostarine (MK-2866) छिटो मांसपेशी निर्माण र बोसो गुमाउन मद्दत गर्दछ। यसले एन्ड्रोजन रिसेप्टर्समा शक्तिशाली प्रभाव पार्दछ, परिणामस्वरूप मांसपेशिको बृद्धि हुन्छ। यसले एथलेटिसमलाई पनि बढाउँदछ, तपाइँको प्रदर्शन उठाउँदा तपाइँ उठाउँदै हुनुहुन्छ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरूले ओस्टारिन लिँदा पनि वजन घटाउँछन्। त्यो किनभने यो SARM ले तपाईंको मेटाबोलिक दर बढाउँछ। तपाईं सजिलैसँग बढी बोसो र क्यालोरीहरू जलाउनुहुनेछ।
यो SARM द्रुत कार्य गर्दछ र तपाईं परिणाम तुरून्त देख्नुहुनेछ। हाल यो मध्ये एक हो बॉडीबिल्डर्सका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय SARMs यस कारणले।
थप रूपमा, यो न्यूनतम साइड इफेक्टको साथ आउँदछ। शरीर सौष्ठवकर्ताहरूले Ostarine प्रयोग गर्दा अन्य सुविधाहरू पनि अनुभव गर्दछ, जस्तै सुधारिएको हड्डी घनत्व र छिटो पुनःप्राप्ति समय।
Ligandrol (LGD-4033) बजारमा सब भन्दा शक्तिशाली मांसपेशी निर्माण SARM हरू मध्ये एक हो। Ligandrol लाई प्रभाव पार्न केवल केहि हप्ता मात्र लाग्छ, एकल चक्र पछि पनि।
यस कारणको एक ठूलो भाग भनेको Ligandrol ले तपाईंको उर्जा कसरी बढाउँदछ। तपाईं लामो समय सम्म काम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र अधिक गहन प्रशिक्षण सत्रहरू सहन सक्नुहुनेछ, जसले केही गम्भीर मांसपेशि लाभहरू निम्त्याउँछ।
यो उत्तम SARM हो यदि तपाई बल्क अप र आफ्नो शरीरको पूर्ण रूप परिवर्तन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यसले मांसपेशीहरूको बृद्धि गर्दछ र पुन: प्राप्ति समय गति गर्दछ। Ligandrol ले बोसो घाटा पनि बढाउछ र हड्डी घनत्व बढाउँछ। यी सबै सुविधाहरूले समग्र सामर्थ्यमा बृद्धि गर्दछ।
Ibutamoren (MK-677) एक ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटगोग (जीएचएस) हो जसले विकास हर्मोनको स्तरलाई बढावा दिन्छ। यसले घोरेलिन हार्मोनको कार्यको नक्कल गरेर गर्छ र दिमागमा घेरलिन रिसेप्टर्स (GHSRs) लाई बाँध्छ, विकास हार्मोनहरू छोड्दै।
बॉडीबिल्डर्सले यो SARM लिन्छ किनभने यसले पेटको बोसो घटाउँछ, दुबै शरीरको मास बढाउँदछ, र प्रोटीन संश्लेषण बढाउँदछ।
GHSR हरू दिमागका क्षेत्रहरूमा पनि पाइन्छ जुन भूख, मुड, खुशी, मेमोरी, जैविक ताल, संज्ञानात्मक कार्यहरू, र मेमोरी नियन्त्रण गर्दछ। जब तपाईं Ibutamoren लिनुहुन्छ, तपाईं केवल बोसो गुमाउनु हुनेछ र मांसपेशिको निर्माण मात्र गर्नुहुने छैन तर राम्रो र अधिक सचेत महसुस गर्नुहुनेछ, तपाईंको फिटनेस प्रदर्शन सुधार गर्ने।
Ibutamoren का सबैका लागि धेरै फाइदाहरू पनि छन्। यसले क्याल्शियम प्रतिधारण बढाउँछ, तपाईको हड्डीको घनत्वलाई सुधार गर्दछ। इबुटामोरेनले उपचारलाई छिटो पार्छ, कोलेजेन उत्पादन बढाउँदछ, सेलुलर मर्मत बढाउँदछ, निद्राको गुणस्तर सुधार गर्दछ, प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउँदछ, र मुटु र कलेजोलाई पनि फाइदा पुग्न सक्छ।
Ibutamoren को राम्रो हिस्सा यो लगभग तुरुन्त काम शुरू गर्दछ।
टेस्टोलोन (RAD-140) सबैभन्दा शक्तिशाली SARMs मध्ये एक हो। यसले दुबै मांसपेशीहरूको वृद्धि बढाउन सक्छ र मांसपेशिको खेर फाल्न रोक्न मद्दत गर्दछ। यो बडिबिल्डर्सका लागि आदर्श हो जो बल्किंगमा केन्द्रित छन्।
शरीर सौष्ठवहरूले टेस्टोलोन लिन्छन् किनकि यसले मांसपेशीहरूको ठूलो र शक्ति बनाउँछ। टेस्टोलोन पनि लोकप्रिय छ किनकि यसले उनीहरूको प्रदर्शनलाई अनुकूलन गर्दछ। यस SARM ले मांसपेशि डिजेनेरेटिव डिसआर्डरहरूको साथ मद्दत गर्न सक्छ।
टेस्टोलोनले तपाईलाई अझ बढि विश्वास दिलाउँदछ। तपाईं राम्रो मुडमा हुनुहुनेछ र लिफ्टिंगको बारेमा बढी उत्साहित महसुस गर्नुहुनेछ।
तपाईंले यी सुविधाहरू मात्र प्राप्त गर्नुहुने छैन तर तिनीहरूलाई चाँडै नै अनुभव गर्नुहुनेछ।
Andarine (S4) कंकाल मांसपेशीहरूमा एन्ड्रोजन रिसेप्टर्ससँग बाँधिन्छ। यसले खनिज हड्डी घनत्व बढाउन मद्दत गर्दछ।
यसले मांसपेशिको निर्माण मात्र गर्दैन र दुबै मांसपेशीहरूको बृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्दछ तर फ्याट पनि कम गर्दछ। यो SARM शरीर सौष्ठवहरूको लागि आदर्श हो जसले "कट र ड्राई" लुक चाहन्छन् - ठूला र बढी परिभाषित मांसपेशीहरू फ्याटको तकिया बिना।
यो SARM प्रारम्भमा मांसपेशि घाटाबाट पीडित बिरामीहरूलाई सहयोग गर्न सिर्जना गरिएको हो, तर यो मुख्यतया बॉडीबिल्डर्सले मांसपेशिको खेर फाल्न रोक्न प्रयोग गर्दछ।
उत्तम परिणामहरूका लागि तपाई Andarine प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ अर्को SARM, जस्तै Ostarine सँग।
मायोस्टिन (YK-11) मायोस्टाटिन अवरोधक हो जुन सामान्यतया बॉडीबिल्डर्स द्वारा प्रयोग गरिन्छ। मायोस्ट्याटिन प्रोटीन हो जसले शरीरलाई धेरै मांसपेशि बढ्नबाट बचाउँछ। मायोस्टाइनले शरीरमा कत्ति मायोस्ट्याटिन सीमित गर्दछ, तपाईंको प्राकृतिक मांसपेशि निर्माण थ्रेसहोल्डलाई पार गर्दै।
यसले केवल मांसपेशिको बृद्धिमा परिणाम ल्याउँदैन तर यसले मांसपेशिहरुमा अवरोध र नयाँ मांसपेशी कोषहरूको गठनमा पनि पुर्‍याउँछ।
टेस्टोस्टेरोनमा केन्द्रित अन्य पूरकहरूको विपरीत, मायोस्टिनले केवल विशिष्ट कक्षहरूमा केन्द्रित गर्दछ। यसले तपाईंले अनुभव गर्न सक्ने साइड इफेक्टहरूलाई सीमित गर्दछ।
S-23 दुबला मांसपेशीहरुमा बढ्छ र हड्डीको शक्ति सुधार गर्नुहोस्, सबै पानीको वजन वा थप फ्याट बिना। यो SARM दुबै छिटो-जुम्ला र ढिलो-जुम्ला मांसपेशीहरू बचाउँछ। यो SARM का कारणले कडा मांसपेशीहरु संग एक chissel देखो परिणाम हुन सक्छ।
हड्डीको स्वास्थ्य सुधार गर्न, यस SARM हड्डी निर्माण कोषहरूको गतिविधि बढाउँछ जसले हड्डी खनिज घनत्व बढाउँछ।
यस सूचीमा धेरै SARMs जस्तै, प्रयोगकर्ताहरूले यस SARM का साथ बोसो गुमाउनेछन्। तपाईं आफ्नो मांसपेशिको मासु पनि राख्न सक्नुहुनेछ, जुन महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं क्यालोरी घाटा आहारमा हुनुहुन्छ भने।
ACP-105 सर्वश्रेष्ठ SARM हो जो शरीर सौष्ठव छन् र कुनै परिणाम अनुभव गर्दै छन्। यो SARM ले मांसपेशिको विकासलाई बढावा दिन्छ र मांसपेशिहरूको बृद्धि गर्दछ। तपाईले सामर्थ्य पनि निर्माण गर्नुहुनेछ र अधिक धीरज पनि पाउनुहुनेछ, तपाईलाई थप उचाल्ने ऊर्जा दिनुहुन्छ।
त्यो मात्र होईन, तर ACP-105 अनौंठो फ्याटबाट मुक्त हुन्छ। असामान्य बोसो अस्वस्थ वसा मात्र हैन तर धेरै जिद्दी पनि हो। ACP-105 ले यसलाई प्रयोग गर्दैन त्यसैले यसलाई प्रयोग गरिएको र जलाइएको छ।
SARM को साथ, पूरक तपाईंको फिटनेस प्रदर्शन बृद्धि गर्दछ र SARMs लिदा पनि तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
कसरी पूरकहरू SARMs भन्दा फरक हुन्छन्? पूरकहरूमा भिटामिन, खनिज, फ्याट्टी एसिड, अमीनो एसिड, र अन्य लाभदायक सामग्री समावेश हुन्छन्। व्यक्तिले स्वास्थ्य लाभ भन्दा अधिक कारणहरूको लागि पूरकहरू लिन्छन्। पूरकहरूमा आवश्यक भिटामिन, खनिज, र अन्य यौगिकहरू हुन्छन् जसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई सुधार गर्दछ।
तर त्यहाँ निर्दिष्ट पूरकहरू छन् जुन शरीर सौष्ठवहरू र SARM लिने जो कोहीले प्रयोग गर्नुपर्दछ।
पहिले छलफल गरिएको रूपमा, तपाईं मात्र एक संक्षिप्त चक्रको लागि SARM लिनुहुन्छ। यदि तपाइँ एक उच्च खुराक मा एक लामो समय अवधि को लागी SARMs लिनुहुन्छ, तपाइँ ले लिनु पर्छ PCT पूरक.
तपाईंले SARMs चक्र समाप्त गरेपछि, तपाईंको शरीरले सामान्य हर्मोन उत्पादन बन्द गर्दछ, विशेष गरी टेस्टोस्टेरोन र कोर्टिसोलको सम्बन्धमा। यो पोस्ट-चक्र प्रक्रियाले तपाईंलाई गम्भीर शरीर सौष्ठव परिणामहरू खर्च गर्न सक्दछ। तपाईं शक्ति र आकार गुमाउन सक्नुहुनेछ, फ्याट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंले प्राप्त गर्न कडा मेहनत गरेको सबै गम्भीर प्रयासहरू फेरि गर्नुहोस्।
चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईं यी सबै अवरोधहरू पीसीटी पूरक आहार लिनबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
सामान्य PCT पूरकले यी सुविधाहरू प्रदान गर्दछ:
कसरत प्रदर्शन बढ्यो
थोरै फाइदा कम गर्न
समग्र स्वास्थ्य बहाली
धेरै पीसीटी पूरकहरूले प्राकृतिक भिटामिन, खनिज, र जडिबुटीहरू जस्तै अश्वगंधा एक्स्ट्र्याक्ट, ट्राइबुलस टेररेट्रिस एक्स्ट्र्याक्ट, रोडोला रोजा एक्स्ट्र्याक्ट, भिटामिन ई, र पाल्म्टो एक्स्ट्र्याक्ट समावेश गर्दछ। यी अवयवहरूले शरीरको संरचना र तपाईंको भलाईको भलाइको भावनामा सुधार गर्दा हार्मोनहरूलाई सन्तुलनमा राख्दछन्।
के तपाईंले SARMs लिनु पर्छ र सेट हुनु पर्छ? चक्र समर्थन सिफारिस गरिएको छ। यी पूरकहरू हुन् जसले SARM चक्रको क्रममा तपाईंको शरीरलाई मद्दत गर्छन्।
सबैले SARM लिने चक्र समर्थन लिनुपर्दछ, चाहे सानो डोज कति सानो छ, एक चक्र छोटो छ, वा प्रयोगकर्ता कसरी SARM का साथ अनुभवी छ। जबकि SARMs ले आश्चर्यजनक परिणामहरू प्रस्ताव गर्दछ र अपेक्षाकृत सुरक्षित हुन्छन्, तिनीहरूले तपाईंको अंगहरूलाई तनाव दिन सक्छन्।
साइकल समर्थन आवश्यक शारीरिक कार्यहरू, जस्तै हृदय, कलेजो, प्रोस्टेट, र कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य रक्षा गर्दछ र तपाईंको रक्तचाप समर्थन गर्दछ। थप रूपमा, चक्र समर्थनले तपाईंले कुनै पनि साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्ने मौका कम गर्दछ।
उच्च-गुणवत्ता चक्र समर्थन पूरकहरू जस्तै अंगूर बीज निकासी, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस एक्स्ट्र्याक्ट, भिटामिन ई, एन-एसिटिल-आई-सिस्टीन, पाल्मेटो एक्स्ट्र्याक्ट, सेलरी बीज निकासी, र नागफनी बेरी जस्ता सामग्रीहरू समावेश गर्दछ।
सबै फिटनेस उत्साही परिचित हुनुपर्छ क्रिएटिनको साथ। यो पदार्थ हो जुन स्वाभाविक रूपमा मांसपेशी कोषहरूमा पाइन्छ, फस्फोक्रियाटिनको रूपमा।
यसले तपाईंको मांसपेशीलाई उर्जा उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ र विशेष गरी भारोत्तोलनको साथ सहयोग गर्दछ। त्यो किनभने तपाईंको मांसपेशीले प्राकृतिक रूपमा क्रिएटिन उत्पादन गर्दछ जब कुनै पनि उच्च-व्यायाम व्यायाम गर्दा, जस्तै भारोत्तोलन।
क्रिएटिनिन सप्लीमेन्टहरूले बल बढाउँदछ, मांसपेशि बढाउँछन्, र समग्र व्यायाम प्रदर्शन बढाउँछन्। त्यसकारण सबै फिटनेस उत्साहीहरूले क्रिएटिन सप्लीमेन्ट लिनुपर्दछ।
क्रिएटिनले अझ बढी सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, यो न्यूरोलॉजिकल फाइदाहरु बाट बचाउछ। त्यसकारण क्रिएटिन एउटा पूरक हो जुन सबैले आफ्नो नियममा थप्नु पर्छ।
तपाईको शरीरले एमिनो एसिडबाट क्रिएटिन उत्पादन गर्दछ, विशेष गरी ग्लाइसिन र आर्जिनिन। क्रिएटिनिन खानामा प्राकृतिक रूपमा फेला पर्दछ, तर यो माछा र रातो मासुमा सीमित छ। यसैले धेरै एथलीटहरू र बॉडीबिल्डर्सले क्रिएटाईनलाई पूरकको रूपमा लिन्छन्।
हामीले छलफल गर्नु अघि मट्ठा प्रोटीन र किन सबै बडी बिल्डरहरूलाई यो पूरक चाहिन्छ, प्रोटीनको बारेमा छलफल गर्न आवश्यक छ र यसले कसरी तौल प्रशिक्षणलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
प्रोटीन एक कारणको लागि "मांसपेशिहरूको बिल्डिंग ब्लक" भनिन्छ। पर्याप्त मात्रामा प्रोटीन खाँदा मांसपेशिहरूको बृद्धि हुन्छ र तपाईंको मांसपेशीको स्वास्थ्यलाई कायम राख्छ, विशेष गरी जब भारोत्तोलन।
प्रोटीनले तपाईको मांसपेशीको शक्ति पनि बढाउन सक्छ। मांसपेशिहरु मर्मत गर्दा यो पोषक आवश्यक छ; प्रोटीनले नयाँ सेटेलाइट कोषहरूलाई संश्लेषण गर्दछ, जसले व्यायामको क्रममा बिग्रिएको टिश्यू र मांसपेशी फाइबरहरूको मर्मत गर्छ।
प्रोटिन मासु, नट, माछा, सिमी, र दुग्ध उत्पादनहरु को रूप मा धेरै खाद्य स्रोतहरु मा पाउन सकिन्छ। तर व्हे प्रोटीन भनेको के हो र बॉडीबिल्डर्सले किन यस्तो प्रकारको प्रोटीन लिनुपर्दछ?
मट्ठा पनीर र केसिनको उप उत्पाद हो। मट्ठामा प्रोटिन र अन्य पोषक तत्वहरूको पर्याप्त मात्रा हुन्छ, जस्तै एमिनो एसिडहरू। मट्ठा प्रोटीन पूरक वा पाउडर लिनाले तपाईंलाई मांसपेशि बढाउन, शक्ति बढाउन, र शरीरको बोसो गुमाउन मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ २० एमिनो एसिडहरू छन् जुन मानव शरीरमा बिभिन्न प्रोटिनहरू बनाउँछन्, तर ती मध्ये केवल। लाई आवश्यक मानिन्छ। यी मध्ये तीनवटा एमिनो एसिडहरू सबैभन्दा धेरै लाभदायकहरू हुन्, BCAAs भनिन्छ। BCAAs मा भेलिन, ल्युसिन, र isoleucine हुन्छ।
यी एमिनो एसिडहरूलाई "ब्रान्चेड चेन" भनेर चिनिने रासायनिक संरचनाले जोडेको छ। तिनीहरूले खेलाडीहरूका लागि धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछन्, जस्तै मांसपेशिको वृद्धि, मांसपेशियोंको घटाइ कम गर्ने, मांसपेशिको खेर जाने रोक्ने, व्यायाम थकान कम गर्ने र कलेजोलाई समेत फाइदा गर्ने।
BCAAs कसरी यती धेरै फिटनेस बेनिफिटहरू प्रदान गर्न सक्छ? बीसीएएले मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण उत्तेजित गर्दछ, जुन मांसपेशिको निर्माणको प्रक्रिया हो। यो पनि भनिएको छ कि बीसीएएले मांसपेशीको क्षतिलाई कम गर्दछ र साथसाथै ढिलाइ हुने मांसपेशी घाउ (डीओएमएस) को लम्बाई र गम्भीरता, बॉडीबिल्डर्सलाई बढी उठाउन प्रोत्साहित गर्दछ।
जबकि BCAAs मांसपेशिहरु को लाभ को लागी आवश्यक छ, यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाइँ BCAAs प्रोटीन पूरक, विशेष गरी मट्ठा प्रोटीन संग।
तपाईं BCAA हरू प्राकृतिक खाना स्रोतहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै मासु, अण्डा, र दुग्ध उत्पादनहरू। तर धेरै जसो शरीर सौष्ठवकर्ताहरूले पूरै रूपमा बीसीएए लिन रुचाउँछन्, विशेष गरी पाउडरको रूपमा। यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँ पर्याप्त BCAAs प्राप्त।
C4 (सामान्यतया पूर्व कसरतको रूपमा चिनिन्छ) सहनशीलता, ऊर्जा, र प्रदर्शन वृद्धि गर्न क्याफिन र अन्य सामग्रीहरूको एक बूस्ट प्रदान गर्दछ। यो सबै तहका शरीर सौष्ठवहरूको लागि आदर्श हो, तर तपाईंले डोज निर्देशनहरूलाई ध्यानपूर्वक पालना गर्नुपर्छ।
दिमागमा राख्नुहोस्, C4 WADA प्रतिबन्धित पदार्थहरूको सूचीमा छ। त्यो किनभने यसले Synephrine HCL समावेश गर्दछ, जसले ATP संश्लेषण र ऊर्जा स्तरहरू बढाउँदछ।
उत्तम परिणामहरूका लागि यी विभिन्न प्रकारका SARMs र पूर्तिहरूको प्रयोग गर्नुहोस्
गम्भीर बॉडी बिल्डरहरूले सम्भवतः उनीहरूले चाहेको नतिजा अनुभव गर्न पूरक र SARMs लिनुपर्दछ। धेरै प्रकारको SARMS र पूरकहरूको साथ, यो उत्तम हो कि प्रयोगकर्ताहरू सबैलाई लिन सक्ने उत्तम प्रकारहरू जान्नुहोस् र कसरी तिनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा लिने हो।
के तपाइँ पूरक र SARMs खोज्दै हुनुहुन्छ? हामी ती दुबै बेच्दछौं! यदि तपाईं बेलायतमा आधारित हुनुहुन्छ भने, आज हामीसँग किनमेल गर्नुहोस्!